Fowl Recipe – Thet Nandar
Category: Fowl Recipe
ရစ်ဌက်သား – ခရမ်းချဉ်သီးချက်
ရစ်ဌက်သား ( FOWL ) ကို ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ ဟင်း အနှစ်ချက်ပီး Parsley ရွက် အုပ်ထားသော ဆီပြန်ဟင်း ကြက်သား နဲ့ အရသာ တူလား ဆိုရင် တူတော့ တူတယ်။ဒါပေမယ့် ကြက်သားလို အရသာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ အကောင်မမြင်ရဘဲနဲ့ အသားပဲ သပ်သပ် စားရမယ်ဆိုရင် …. ဒါ ဘာအသားလဲး ဆိုတာ အမဲသားတို့ ဆတ်သားတို့ … ကျွဲသားတို့ထက် နည်းနည်း ခွဲရ ခက်တယ်။ စားနေကျ လူတွေ ဆိုရင်တော့ ခွဲတတ်လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်တော့ ရစ်ဌက်ကို အခုမှ စားဖူးတာမို့လို့ …. အမဲသားတို့ ကျွဲသားတို့ကျတော့ ရန်ကုန်မှာ ဆိတ်သားခြောက်တို့ ဘာတို့ ၀ယ်နေကျမို့လို့ ခွဲတတ်သေးတယ်။ ** […]
Read More ရစ်ဌက်သား – ခရမ်းချဉ်သီးချက်